Iindaba-Ukusetyenziswa kombhobho we-PE
1. Umbhobho wemigodi we-PE
Kuzo zonke iiplastiki zobunjineli, iHDPE ineyona nto inxiba kakhulu kwaye yeyona ibonakalayo. Ukuphakama kobunzima beemolekyuli, kokukhona inxiba into enganyangekiyo, ingaphezulu kwezinto ezininzi zesinyithi (ezinje ngentsimbi yekhabhoni, intsimbi engenasici, ubhedu, njl. Phantsi kweemeko zokubola okunamandla kunye nokunxiba okuphezulu, ubomi benkonzo amaxesha angama-4-6 ombhobho wentsimbi kunye namaxesha ali-9 e-polyethylene eqhelekileyo; Kwaye ukusebenza kokuhambisa kuphuculwe ngama-20%. Idangatye nekudodobalisa iipropati antistatic elungileyo kwaye ukuhlangabezana neemfuno eziqhelekileyo. Ubomi benkonzo esezantsi ingaphezulu kweminyaka engama-20, inezibonelelo ezibonakalayo zoqoqosho, ukumelana nefuthe, ukunxiba ukuxhathisa kunye nokumelana kabini.
2. PE umbhobho welindle
Umbhobho we-PE wokulahlwa kwelindle ukwabizwa ngokuba ngumbhobho ophezulu we-polyethylene, oko kuthetha ukuba i-HDPE ngesiNgesi. Olu hlobo lombhobho luhlala lusetyenziswa njengokhetho lokuqala lobunjineli bakamasipala, ubukhulu becala lisetyenziswa kwishishini lokucoca ilindle. Ngenxa yokuxhathisa kwayo ukunxiba, ukumelana ne-asidi, ukumelana ne-corrosion, ukumelana nobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu kunye nezinye izinto, ngokuthe ngcembe ithathe indawo yokuma kwemibhobho yemveli efana nemibhobho yentsimbi kunye nemibhobho yesamente kwimarike, ngakumbi kuba le mibhobho ilula ngokobunzima kwaye kulula ukuyifaka nokuhamba, kwaye lukhetho lokuqala lwezixhobo ezitsha. Abasebenzisi kufuneka banike ingqwalaselo eyodwa kula manqaku alandelayo xa bekhetha imibhobho eyenziwe ngezi zinto: 1. Nika ingqwalaselo eyodwa kukhetho lwezixhobo ezingafunekiyo zemibhobho yeplastiki. Kukho amawaka amabakala e-polyethylene ekrwada, kwaye kukho izinto ezingafunekiyo ezisezantsi njenge-yuan ezingamawaka ngetoni nganye kwintengiso. Iimveliso eziveliswe yile nto eluhlaza azinakwakhiwa, kungenjalo, ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ube yilahleko kuya kuba kukhulu. 2. Ukukhethwa kwabenzi bemibhobho kuya kuxhomekeka kubavelisi abasesikweni nabaqeqeshiweyo. 3. Xa ukhetha ukuthenga imibhobho ye-PE, jonga abavelisi kwindawo leyo ukuze ubone ukuba banako na imveliso.
3. Umbhobho wokuhambisa amanzi we-PE
Imibhobho ye-PE yokuhambisa amanzi ziimveliso ezinokutshintsha zemibhobho yesinyithi kunye nemibhobho yamanzi okusela ye-PVC.
Umbhobho wonikezelo lwamanzi kufuneka uthwale uxinzelelo oluthile, kunye nentlaka ye-PE enobunzima obuphezulu beemolekyuli kunye neepropathi ezilungileyo zoomatshini, ezinjenge-HDPE resin, ihlala ikhethiwe. I-LDPE resin ine-tensile ephantsi, ukunganyangeki koxinzelelo, ukuqina okungalunganga, uzinzo olubi ngexesha lokubumba kunye nonxibelelwano olunzima, ke ayifanelekanga njengombhobho woxinzelelo lwamanzi. Nangona kunjalo, ngenxa yesalathiso sayo sezempilo, i-PE, ngakumbi i-HDPE resin, iye yaba yinto eqhelekileyo yokuvelisa imibhobho yamanzi okusela. I-HDPE resin ine-viscosity ephantsi, i-fluidity elungileyo kunye nokusebenza ngokulula, ke isalathiso sayo sokunyibilika sinoluhlu olubanzi lokukhetha, ihlala i-MI iphakathi kwe-0.3-3g / 10min.